Jereo ny morontsiraka tsara indrindra any Azores | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka tsara indrindra any Azores
Susana Garcia | | General, nosy, Portiogaly
El archipelago an'ny Azores, an'ny PortugalToerana nofinofy izy io, toerana fialantsasatra izay tsy ampoizina foana. Vondronà nosy portiogey sivy izy io eo afovoan'ny Oseana Atlantika, izay mamorona ampahany amin'ny antsoina hoe Macaronesia. Nosy lehibe any Sud dia Sâo Miguel sy Terceira, na dia afaka mankafy fitsangatsanganana tsara amin'ny hafa aza ianao. Graciosa, Pico na Faial dia nosy sasany.
Ao amin'ny Azores dia hahita morontsiraka kilometatra isika afaka mankafy ny morontsiraka tsara indrindra. Ny mpizahatany dia mirohondrohona amin'ireo nosy ireo noho ny antony maro, fa ambonin'izany rehetra izany dia noho izy ireo malaza ho mahavariana. Misy làlana fitsangantsanganana, velaran-tany feno ahi-maitso, tanàna sy tanàna misy tantara maro ary mazava ho azy ny morontsiraka izay hifantohantsika.
1 Mosteiros Beach (Sâo Miguel)
2 Formosa Beach (Santa Maria)
3 Santa Bárbara Beach (Sâo Miguel)
4 Porto Pim Beach (Faial)
5 Caloura Beach (Sâo Miguel)
6 Silveira Beach (Terceira)
7 Fajâ da Caldeira de Santo Cristo beach (Sâo Jorge)
Mosteiros Beach (Sâo Miguel)
Ity morontsiraka ity dia miorina ao avaratra andrefan'ny nosy. Satria volkano ny niavian'ny nosy, ara-dalàna raha mahita moron-dranomasina maro isika miaraka amin'ny fasika mainty. dia miavaka ny morontsiraka satria eo amin'ny faravodilanitra ianao dia afaka mahita nosy maro fantatra amin'ny anarana hoe vatolampy Mosteiros, izay manampy firavaka amin'ny tontolo. Ireo monoliths volcanic mivoaka avy amin'ny ranomasina dia manana endrika capricious, novolavolain'ny fihetsiky ny rano sy ny rivotra. Ity morontsiraka ity dia manana endrika mahafinaritra sy rano madio, ary koa misy serivisy toy ny fijanonana.
Formosa Beach (Santa Maria)
Ao amin'ny nosy Santa María dia afaka mahita moron-dranomasina vitsivitsy isika amin'ireo izay hita matetika manerana ny nosy Azores, izay mazàna manana fasika maizina ary misy rivotra sy onja. Fa ao amin'ny Santa María dia manana torapasika toa an'i Formosa isika, izay manana fasika volamena ary matetika dia misy tsio-drivotra mahafinaritra, izay mahasarika azy. Tsy morontsiraka be dia be izy io, fa ny fasika kosa dia ampy hahafahana mandany andro tsara any amoron-dranomasina mandro amin'ny rano madio sy kristaly. Raha te-hahita ny morontsiraka amin'ny ankapobeny isika dia afaka miakatra amin'ny Miradouro da Macela. Ny fitsangatsanganana an-tongotra dia mahazatra ao amin'ny nosy mba hankafizanao ireo sary mahavariana.
Santa Bárbara Beach (Sâo Miguel)
Ity morontsiraka ity dia miorina amin'ny faritra avaratra-afovoan'ny nosy volkanika. Izy io dia manokana ao amin'ny Tanàna Ribeira Seca ary faritra iray kilaometatra ny fasika. Tsy misy morontsiraka lava be eto amin'ity nosy ity, ka io no iray amin'ireo lehibe indrindra. Ao aminy, toy ny any amin'ny nosy maro hafa, misy fepetra tonga lafatra amin'ny fampiharana ny fanatanjahan-tena toy ny surf, ny sidina, na ny fitsangantsanganana an-dranomasina, noho izany atleta maro izay misafidy izany hankafizany ny fanatanjahantena ankafiziny. Izy io dia morontsiraka malaza eto amin'ny nosy, noho izany dia manana serivisy maro toy ny kianja filalaovana, bara na fandroana koa. Ka ny fianakaviana iray manontolo dia afaka mankafy ny andro amoron-dranomasina mety indrindra ahafahan'ny tsirairay miala voly.
Porto Pim Beach (Faial)
Ity morontsiraka ity dia a morontsiraka fasika fotsy, zavatra tsy mahazatra any amin'ireo nosy. Eo akaikin'ny tanàna fanjonoana izy io ary na dia tsy dia lehibe loatra aza ny tontolo iainana dia mahatonga azy io ho toerana mahafinaritra sy tena tsara. Toerana tonga lafatra snorkel, satria mahita trondro maro isika.
Caloura Beach (Sâo Miguel)
Caloura no anaran'ny tanàna fanjonoana kely iray amin'ilay nosy. Ity nosy Azores ity sy ny maro hafa dia manana dobo voajanahary tena tsara tafatsangana ao vatolampy volkano izay mamorona torapasika mahatalanjona sy tsy manam-paharoa. Ity dia iray amin'ireo manintona manokana mitondra ny olona any amin'ny nosy isan-taona. Manana moron-dranomasina kely misy rano manga handro isika ary eo akaikin'ny morontsiraka dia misy dobo voajanahary mahafinaritra izay mety amin'ny fandroana. Iray amin'ireo morontsiraka izay miavaka amin'ny mampiavaka azy.
Silveira Beach (Terceira)
Io no iray amin'ireo nosy lehibe, ka tsy vitsy ny toerana handro. Ity morontsiraka ity dia eo akaikin'ny Angra do Heroismo. Tsy morontsiraka voajanahary izy io, fa lela mivaingana izay mivoaka ao anaty rano ary manolotra toerana ho an'ny mpandroana. Satria feno vato ny faritra manodidina azy, io no toerana be mpandro indrindra.
Fajâ da Caldeira de Santo Cristo beach (Sâo Jorge)
Mba hahatakarana ny dikan'ity morontsiraka ity dia tsy maintsy fantatsika ny tian'izy ireo holazaina amin'ilay hoe fajâ. Tonga mba hamaritana io teny io ireo lemaka izay miforona amoron-tsiraka nandritra ny taonjato maro noho ny famindran'ny lava, ka nahatonga ireo farihy volkano kely izay voahodidin'ny zavamaniry sy heniheny. Avy amin'ny toerana avo dia hitanao fa fanitarana ny tehezan'ireo volkano. Manana nosy maromaro ity nosy ity ary ity no iray amin'ireo tsara tarehy indrindra. Mba hahatratrarana azy dia tsy maintsy mamakivaky ny Reserve Reserve ianao amin'ny làlana fitsangatsanganana ahatongavana any amin'ny faritry ny morontsiraka, izay ahitantsika trano fialofana sasany hanombohana na hampihatra an'ity fanatanjahantena ity. Eo koa ny morontsiraka vato sy vato maizina ary ny ranomasina mahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny morontsiraka tsara indrindra any Azores
Ny nosy tsara tarehy indrindra any Gresy